Semalt: Iintlobo zeencwadana ze-WordPress Ufuna ukwazi malunga
Ukukhetha i-WordPress yeyona nto yinto enzima kunokwenza kuyo iwebhusayithi yakho okanye iblogi. Enye yezinto eziphambili zeendaba ze-WordPress kukuba unika ubungqina obuphezulu kunye nokuphuculwa kwesosiza sakho kwaye akudingi na ubuchule bokuphuhlisa okanye ukuyila iwebhusayithi. Iimpawu ze-WordPress zishiya impembelelo entle yomxholo wakho kubafundi kwaye utshintshe indlela eyafumaneka ngayo amakhasi akho ewebhu. Iingongoma zenza ukuba iiwebhusayithi okanye iblogi zikhangeleke ngokuchofoza lula.
Ngaphandle kokulawula ukubonakala kwendawo yakho okanye iblogi, ii-WordPress themes zidlala indima ebalulekileyo okanye enkulu kwi-SEO (injini yokukhangela injini). I-SEO yinkqubo yokuphucula okanye ukukhulisa isayithi okanye iblogi yakho ukuze ihambelane kakuhle kwiphepha le-injini ye-injini (SERPs) - dondoli per neonati prezzi gomme. I-Google, iBing, kunye ne-Yahoo zikhetha iiwebhusayithi ezinemixholo emikhulu kwaye zibalawule ngeendlela ezahlukeneyo zegama. Unokwenza imali ngewebhusayithi yakho kwaye unokuqhuba i-traffic yezithuthi kwiiveki.
U-Oliver King, ingcali ehamba phambili ye-14 (Semalt , ichaza ukuba kukho iintlobo ezintathu eziphambili zeendaba ze-WordPress:
1. Iingqungquthela ze-WordPress zeNkcazo:
Iingqungquthela ze-WordPress zeprayimenti zingumgangatho ophezulu kwaye ziphuhliswe ngabalobi abangcono okanye iinkampani ezinkulu. Uya kufuneka uhlawule into yokufikelela loo themes, amawijethi abo, amamenyu kunye nazo zonke iindlela. Iingqungquthela ze-premium zithintela into esuka kwi-$ 50 ukuya kwii-500 zamaziko kwiwebhusayithi kwaye ilayisenisi..Banikela ngeenzuzo ezilandelayo kwiwebhusayithi:
Iikhowudi zezinga eliphezulu
I-SEO yenza lula
Ukuphunyezwa kweendlela eziphambili, ezona ziphezulu kunye zakutsha
Iingqungquthela zeprayimenti zenziwe kakuhle kwaye zenza kakuhle
Ziyakwazi ukuguquguquka ngakumbi kunezihloko ezikhululekile kwaye zinike inkxaso ngokupheleleyo kubasebenzisi
Kukhuselekile ukukhankanya ukuba kukho amawaka eendaba ze-WordPress zamahhala kwi-intanethi. Inxalenye ephambili kukuba awukho mfuneko yokuhlawula nayiphi na into ukufikelela kwiingqungquthela kwaye unokuyifaka kwaye uyisebenze ngokukhawuleza. Ezi ngqungquthela zikhoyo kwisikhokelo semxholo we-Wordpress kwaye ziza kwiindidi ezahlukahlukeneyo, ukuyila kunye neendlela. Enye yezona zihloko eziphezulu zeengqungquthela zamahhala kukuba azinakunceda ukukhulisa iwebhusayithi yakho ngendlela engcono. Abaphuhlisi bezakhono baye bazakhela iingqungquthela zabo kwaye bazenza zifumaneke kwi-intanethi, kodwa zikho ezimbalwa iindlela zokufumana inzuzo.
Njengoko izihloko ze-WordPress zineempembelelo enkulu kwiwebhusayithi yakho, i-SEO, isantya sobunzima, ukusebenza kwayo, kunye nokwandiswa kweblogi yakho, kufuneka ukhethe iintetho ze-premium kwiimxholo ze-WordPress zamahhala. Ukuba awunayo imali eyaneleyo yokuthenga izihloko zeprayimenti, ungazama iingu-20 ezimashumi elineshumi elinamanci mabini aneshumi elinesibhozo, ezizo zihloko ezibini ze-WordPress ezikhululekile.
3. Izihloko zePosi zePressPress:
Iindikimba ze-WordPress eziqhelekileyo ziyaziwayo ngokubonakala kwazo eziyingqayizivele kwaye ezibonakalayo. Ezi zihloko zifuna ukuba ufikelele kwiivenkile ze-intanethi kwaye unempawu ezithile. Iingqungquthela zesithethe ziphuhliswa kwiindawo ezinobungcali okanye iimveliso ngabavelisi kunye nabaqulunqi ngokumalunga nemirhumo enzima. Banikezela ezininzi iinketho kunye nokuguquguquka, kodwa ezo zimpawu zikhawulelwe kubasebenzisi abahlawule imali yabo.
Enye yezona zinto ziphantsi kukuba iindatshana eziqhelekileyo zibiza kakhulu, zihamba ukusuka kwi-$ 600 ukuya kwi-6,500 zama-dollar ngokuxhomekeke kwindlela abanamakhono kunye nabadumileyo abakhethiweyo. Imimiselo engcono kakhulu yiNdlu yeRose yenkambiso yenkcubeko kunye neNkcazo yesiCwangciso seNgeniso yeNkcazo.